Muusikadu Waligeed kuma Joogto New Orleans, Xataa inta lagu jiro Hurricane Ida oo leh saamayn weyn
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Muusikadu Waligeed kuma Joogto New Orleans, Xataa inta lagu jiro Hurricane Ida oo leh saamayn weyn
Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Madaxweynaha Mareykanka Biden ee FEMA
Qaybta 4aad Hurricane Ida dabaysha 120-150 mph iyo duufaannada 'masiibo' ah ayaa saqafyada jeexjeexay dhismayaasha, ka dhigaya Wabiga Mississippi gadaal u qulqulaya iyo munaarado dhaadheer oo gariira. Duufaanta ayaa hadda ku dhawaad ​​ku dhawaad ​​hal milyan oo qof koronto la ’.
Duufaanta Ida ayaa ka reebtay dhammaan New Orleans awood la'aan sababtuna tahay “waxyeellada gudbinta musiibada ah,” sida laga soo xigtay Entergy New Orleans.
Gobolka Mississippi ee Mareykanka ayaa ka warbixiyay korontada gobolka oo dhan
Macaamiisha korontada ayaa laga yaabaa inay korontada ka maqnaadaan toddobaadyada soo socda.
Ducooyin loogu talagalay New Orleans. Waxay la mid tahay Katrina mar kale waa farriinta guud ee laga helay Twitter.
Louisiane waxay u baahan tahay salaadda. Iyada oo leh heerarka tallaalka COVID-19 ee ugu hooseeya, Gobolkan Mareykanka wuxuu dadka ku diiwaangeliyaa isbitaallada iyo hawo-mareennada. Hurricane Ida ayaa durba ah duufaan ka weyn kana sii daran marka loo eego Hurricane Katrina oo dishay 1833 qof sanadkii 2005.
Qoraal xanaaqsan ayaa leh:
Anti-vaxxers+ka hortagga maaskarada oo is dilaya & kuwa kale @[emailka waa la ilaaliyay] yaa xirfadaha hormariyay dila ppl. Horeba isbitaalo buuxa (covid) inta lagu jiro Duufaane Ida waa caddaynta waxa dhaca marka hoggaamiyeyaasha siyaasaddu ay ku fashilmaan ficillada (u codee MAYA wax walba)
Isbitaallada ku yaal Koonfur-bari waxay ku yar yihiin oksijiin, iyadoo meelaha ugu daran (sida Louisiana) ay ku hareen kaliya 12 illaa 24 saacadood. Haddii Hurricane Ida carqaladeyso silsiladda sahayda gabi ahaanba, natiijadu waxay noqon kartaa masiibo.
TALO: Dadka ku nool Louisiana iyo gobollada kale ee laga yaabo inay awoodda ka lumiyaan sababtuna tahay Hurricane Ida, ku buuxi weelkaaga qubeyska biyo. Isticmaal biyahan si aad u buuxiso haamaha musqusha si aad u isticmaasho musqulahaaga. Magaalooyinka korontada dabacsan waxay ka dhigan tahay in bambooyinkii biyaha aysan shaqeyn doonin sidaa darteed biyo ma laha.
- Dhammaan Kaniisadda Orleans - oo ah magaalada New Orleans - waa awood la'aan, sida uu qabo NOLA Ready, ololaha u diyaargarowga degdegga ah ee New Orleans.
Jiritaanku wuxuu u badan yahay arrimo la xiriira gudbinta oo aad u weyn.
Tweet ayaa leh: Waxaan hore iyo gadaal ula socday afarta New Orleans kanaalka. ABC one ayaa saacadihii la soo dhaafay waday barnaamijyo joogto ah. Waxaan la yaabanahay haddii hawada laga soo tuuray oo aysan dib u soo laaban karin.
Qaybta 4aad Duufaanta Ida ayaa ku dhufatay Louisiana 16 sano kadib burburkii Hurricane Katrina; barasaabka John Bel Edwards ayaa sheegay in duufaanta ay noqon karto tii ugu xumeyd ee Louisiana tan iyo 1850 -meeyadii.
Dhismayaasha dhaadheer ayaa ruxaya, wicitaanada 911 ma soo jawaabayaan.
Muusiggu si kastaba ha ahaatee marnaba kuma joogsado New Orleans. "Xitaa xitaa" duufaan nolosha wax ka beddeleysa "Phil Lavelle ayaa dhejiyay.
Muusiggu marna kuma joogsado New Orleans. Xitaa uma aha duufaan "nolosha wax ka beddeleysa" #HurricaneIda pic.twitter.com/wc3s8STIEq
TWEET: Haddii aad taqaanid ururro la aamini karo oo la hubiyay oo heegan ugu jira inay gargaar siiyaan kuwa ay saamaysay Hurricane Ida fadlan ila soo socodsii si aan ugu deeqo. Waxaan xusuustaa Katrina. Waxaan xusuustaa dayacaad dawladeed iyo dadkii dhibku ka soo gaadhay dartiis. Mar kale ma aha.
Warbixin war ayaa sheegeysa in ay aad ugu nabdoon tahay Bourbon Street ee New Orleans, wax walba waa mugdi mugdi ah. Roobkii iyo dabaylihii ayaa garaacaya.
Y'all… Xitaa ma aqaan waxa ay tahay saaxirka laakiin waa wax laga naxo. #HurricaneIda
Alexander Scott Alexander oo ku sugan CBD ee New Orleans pic.twitter.com/Yy51B2ECn3
8.00:4 fiidnimo Duufaanta Ida ayaa hoos loo dhigay heerkii ugu sarreeyay ee Duufaantii 3-aad iyadoo loo beddelay Duufaantii Qaybta XNUMX-aad oo waxay sii ahaan doontaa mid sii xoogaysata hal habeen. Saameyntu weli waa weyn tahay.
Madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa bartiisa Twitter -ka ku soo qoray:
Waad ku mahadsan tahay shaqada adag ee @FEMA, waxaan horay u sii diyaarinay khayraadka, qalabka, iyo kooxaha jawaabta si aan uga jawaabno HurricaneIda. Taas waxaa ku jira in ka badan 2,400 oo shaqaale FEMA ah, malaayiin cunto ah iyo litir biyo ah, koronto -dhaliyayaal, kooxaha goobidda iyo samatabbixinta, iyo in ka badan 100 ambalaas.